A Hapụrụ Ha Ka Ha Kwusawa Ozi Ọma na Dọminikan Ripọblik | Akwụkwọ Mgbaafọ 2015
E Gburu Trujillo
N’ihe dị ka afọ 1960, otú mba dị iche iche si akatọ ọchịchị aka ike Trujillo na-achị na otú ndị obodo ya si agba ọchịchị ya ụkwụ bịara karịa akarị. N’agbanyeghị ihe ndị a, Nwanna Milton Henschel si n’isi ụlọ ọrụ anyị bịa Dọminikan Ripọblik ma soro gaa mgbakọ abalị atọ e nwere na Jenụwarị afọ 1961. Ndị bịara ya dị narị mmadụ itoolu na iri ise na asaa. E mekwara mmadụ iri abụọ na asaa baptizim. N’oge ahụ Nwanna Henschel bịara, o nyeere ụmụnna aka ha amalite ịhazigharị otú ha ga-esi na-ekwusa ozi ọma, seekwa map ókèala ọgbakọ dị iche iche ga na-aga ekwusa ozi ọma.
A họpụtara ndị nlekọta sekit abụọ ka ha na-eleta ọgbakọ dị iche iche. Ha bụ Nwanna Enrique Glass na Nwanna Julián López. Nwanna Julián kwuru, sị: “A bịa n’ọgbakọ ndị dị na sekit m, abụọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, ndị ọzọ adịrị n’ebe ugwu. Ọ bụ Nwanna Enrique na-eleta ọgbakọ niile ọzọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ọ bụkwa ya na-eleta ọgbakọ niile dị n’ebe ndịda.” Nleta a ha letara ọgbakọ dị iche iche mere ka ọgbakọ ndị ahụ maliteghachi iso nzukọ Jehova ụkwụ n’ụkwụ, meekwa ka okwukwe ụmụnna anyị sikwuo ike.
Mgbe Nwanna Salvino Ferrari na nwunye ya Helen na-aga Dọminikan Ripọblik n’afọ 1961
N’afọ 1961, e zitere Nwanna Salvino Ferrari na nwunye ya Helen na Dọminikan Ripọblik. Ha gụrụ akwụkwọ na klas nke abụọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Ihe ha mụtara n’ozi ha jere na Kuba bara ezigbo uru na Dọminikan Ripọblik, bụ́ ebe e nwere ọtụtụ ndị chọrọ ịnụ ozi ọma. Salvino mechara soro na Kọmitii Alaka ruo mgbe ọ nwụrụ n’afọ 1997. Nwunye ya Helen ejeekwala ozi oge niile afọ iri asaa na itoolu. Ọtụtụ n’ime afọ ndị a bụ afọ ndị o ji jee ozi ala ọzọ.
Obere oge Nwanna Ferrari na nwunye ya bịara na Dọminikan Ripọblik, ọchịchị aka ike Trujillo na-achị kwụsịrị n’ike n’abalị iri atọ n’ọnwa Mee, afọ 1961. Ọ bụ n’abalị ụbọchị ahụ ka a gbakasịrị ụgbọala ya, gbagbuo ya. Ma, ọnwụ ya emeghị ka udo dị, n’ihi ya, ọgba aghara dịgidere n’obodo ha ruo ọtụtụ afọ.
Ụmụnna Anyị Akwụsịghị Ikwusa Ozi Ọma
N’oge ndị ahụ, e zitekwuru ndị ozi ala ọzọ. Ha bụ Nwanna William Dingman na nwunye ya Estelle, na ụmụnna nwaanyị abụọ ọzọ aha ha bụ Thelma Critz na Flossie Coroneos. E si Puweto Riko zite ha, naanị abalị abụọ e gbuchara Trujillo. Nwanna William Dingman na nwunye ya so ná ndị mbụ gụrụ akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Nwanna William sịrị: “N’oge ahụ anyị bịara, ọgba aghara dị n’ebe niile, ndị agha nọchisiri ebe niile. Ọgba aghara a mere ka ndị mmadụ na-atụ egwu na a ga-akwatu ọchịchị na-achị mgbe ahụ, n’ihi ya, ndị agha na-enyocha onye ọ bụla na-agba n’ụzọ. Ha kwụsịrị anyị n’ọtụtụ ebe ka ha hụ ihe ndị anyị bu. Ha wepụtara ihe niile dị n’akpa anyị lee, ma ihe ndị kacha obere.” O siiri anyị ike ikwusa ozi ọma n’oge ahụ.
Ndị a bụ Nwanna Nwaanyị Thelma Critz na Estelle Dingman na di ya William. Ha ka nọ na Dọminikan Ripọblik eje ozi n’agbanyeghị na ha ejeela ozi ala ọzọ afọ iri isii na asaa
Nwanna William kwukwara, sị: “N’oge ahụ Trujillo na-achị ọchịchị nchigbu ya, a gwara ọhaneze na Ndịàmà Jehova na-arụrụ ndị ọchịchị Kọmunist ọrụ nakwa na e nweghị ndị ka ha njọ n’obodo. . . . Ma, anyị ji nwayọọ nwayọọ mee ka ọhaneze mara na anyị abụghị ndị ọjọọ.” N’ihi ozi ọma anyị na-ekwusa, ọtụtụ ndị chọrọ ịmụta eziokwu bịara na-ege anyị ntị, ma bata n’ọgbakọ. Mgbe afọ ije ozi 1961 gwụrụ, e nwere mmadụ iri atọ na atọ bụ́ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche.